Yiziphi izingosi zokuthenga eziku-inthanethi ezihamba phambili eNdiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
Yiziphi izingosi zokuthenga eziku-inthanethi ezihamba phambili eNdiya?
I-Absolut India | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 18/08/2020 12:07 | India
Lesi sikhathi sizokwazi ukuthi yikuphi okuhle kakhulu ama-indian online shopping sites. Ake siqale ngokubalula flipkart.com, ingosi esivumela ukuthi sithenge izincwadi, omakhalekhukhwini, ama-laptops, izesekeli zekhompyutha, amakhamera, ama-movie, umculo, amathelevishini, amafriji, ama-MP3 player, njll. IFlipkart.com ithathwa njengeyona nkampani enkulu kunazo zonke e-commerce esizweni.
Kufanele futhi sikhombe necala le- ebay.in, inguqulo yaseNdiya yesitolo sokuthenga nokuthengisa esithandwa kakhulu emhlabeni. I-Ebay inikeza njengoba wazi kahle imikhiqizo emisha futhi esetshenzisiwe ezigabeni ezahlukahlukene.
Isikhundla sesithathu seTradus.in, ingosi ephethwe yi-Ibibo, lapho singathenga khona izincwadi, izingubo, omakhalekhukhwini, amakhamera, amawashi, izinto zikagesi, phakathi kwabanye.
Thengaclues.com ingosi lapho singathenga khona amakhamera, izesekeli zekhompyutha, omakhalekhukhwini, izipho, ubucwebe, izimonyo, amathoyizi, izingubo nezincwadi.
I-Myntra.com ingosi yokuthengisa lapho singathenga khona imikhiqizo yemfashini efana nezikibha, izicathulo, amawashi, phakathi kwabanye.
Indawo yesithupha ngeye IkhayaShop18.com, ingosi lapho sizothola khona izesekeli zasekhishini, amakhamera, omakhalekhukhwini, ama-laptops, izipho, okokugqoka, njll.
Yebhi.com Ithathwa njengenye yezindawo ezinkulu kakhulu zokuthenga ngokuya ngemfashini. Lapha sinethuba lokuthenga izicathulo, okokugqoka, ubucwebe, izikhwama, njll.
Ngezi.com ingosi lapho singathola khona ukunikezwa kwansuku zonke kwezindawo zokudlela, ama-spas, uhambo, kanye nemikhiqizo ehlukahlukene. Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi ukuthunyelwa kumahhala.
Indawo yesishiyagalolunye ingeka- pepperfry.com, ingosi yokuthengiswa kwezingubo zabesilisa nabesifazane, izesekeli zokuhlobisa ikhaya, ubucwebe, amakha, izimonyo, ifenisha, izikhwama, njll.
Imininingwane engaphezulu: Ukuthenga eLisbon
Umthombo: Izinto zamahhala zaseNdiya
Photo: Ubuchwepheshe Brunch
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yiziphi izingosi zokuthenga eziku-inthanethi ezihamba phambili eNdiya?
U-Alejandro Lopez Palma kusho
Ngabe kunokwethenjelwa ukuthenga ilaptop ku-flipkart? Ngicabanga ukuthenga imodeli engamakethwa eSpain.
Phendula u-Alejandro López Palma
lalit gulwani kusho
I-Flipcart, i-Snapdeal, i-Amazon, yizindawo ezintathu eziphezulu zokuthenga nge-inthanethi e-India futhi zinokwethenjelwa kakhulu.
Phendula lalit gulwani
angie paola kusho
Ntambama, ngiyethemba ungangisiza ngalesi simo engikuso, okwenzekayo ukuthi ngizoya esisekelweni esiqala eNdiya, futhi ukuba lapho kuzofanele ngithenge okudingekayo ukusiza abanye abantu, kepha lokho engikushoyo ngizothenga ngeke ngikuthole kuleli futhi kuzofanele ngithenge online, umbuzo wami uthi, eNdiya ngaphandle kwekhadi lesikweletu ingabe ikhona enye indlela yokuthenga kwi-Intanethi?
Ntambama, ngiyethemba ukuthi bangangisiza ngesimo sami, okwenzekayo ukuthi ngizoya esisekelweni esizoqala e-india, futhi ngenkathi ngilapho kuzofanele ngithenge okudingekayo ukusiza abanye abantu, kepha lokho i-buy ayitholi kuleli zwe futhi kuzofanele ngithenge online, umbuzo wami uthi, ngabe ikhona enye indlela yokuthenga kwi-Intanethi e-india ngaphandle kwekhadi lesikweletu?
Phendula u-angie paola
Abaholi Bomlando BaseNdiya
Imikhiqizo ekhishwa kakhulu e-India